Multimedia – Windows – Vessoft
Ciyaaryahan awood kuu ogolaanaya in aad u ciyaaro badan oo qaabab warbaahinta iyo isticmaali filtarrada audio iyo saamaynta video kala duwan.
iTunes – ciyaartoy caan ah oo dib ugu soo noqda faylasha warbaahinta. Software-ka wuxuu taageeraa is-dhexgalka macluumaadka u dhexeeya kombuyutarkaaga iyo aaladda Apple.
qalab The xirfadeed si ay u abuuraan iyo qaso files audio. software The soo jeedinaya fursadaha ballaaran ee DJ khibrad iyo muusikalayda.
Beddelaad kasta oo Fiidiyoow ah – qalab wax ku ool u ah beddelka faylka degdegga ah iyo tayada leh. Software-ka ayaa taageera qaababka caanka ah wuxuuna ka kooban yahay astaamaha la heli karo si loogu badalo feylasha.
BS.Player – waa ciyaartoy shaqeynaya oo taageera qaababka warbaahinta caanka ah. Softiweerku wuxuu ka kooban yahay tiro howlo waxtar leh wuxuuna kuu oggolaanayaa inaad sifo-koobiyeyn ah u sameysatid.
KMPlayer – ciyaartoy badan oo taageero ka helaya qaababka warbaahinta caanka ah. Softiweerku wuxuu bixiyaa dib u ciyaar tayo sare leh oo faylasha warbaahinta ah waxayna la shaqaysaa cinwaan hoosaadyada.
AIMP – ciyaar maqal ah oo taageerta qaababka codka caanka ah, waxay leedahay set of saamaynta codka, ku-beddelashada maqalka iyo tifaftiraha calaamadaha.
Freemake Video Converter – waa aalad awood badan oo loogu badalo feylasha qaabab kala duwan. Waxay taageertaa kartida lagu habeeyo dejinta inta lagu jiro wareejinta faylka.
Ciyaaryahanka warbaahinta oo leh taageerada qaababka caanka ah. Software wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku darto feylalka kaydinta daruuraha oo u fiirso qalabka kala duwan.
K-Lite Codec Pack – oo ah nooc codeode ah oo dib loogu soo celinayo qaababkii casriga ahaa ee maqalka iyo fiidiyaha. Softiweerku wuxuu bixiyaa iswaafajinta udhaxeeya kodisyada wuxuuna awood u siiyaa inay ku habeyn karto qaabeyntooda.
Software baahisaa waxyaabaha video internetka ah. Software wuxuu taageeraa warbaahinta ee video hoorto ka shaashadda kombiyuutarka iyo kamaradaha adeegyada video caan ah.
Mid ka mid ah keentay video tifaftirayaasha oo taageero xoog badan oo ah il audio. Software waxay siisaa fursadaha ballaaran si ay u abuuraan video ah oo khibrad leh ee tayo sare leh.
Tifaftiraha Movavi Video – tifatire fiidiyoow aad u fiican oo leh filtarro iyo saameyn badan oo kala duwan si loo dhammeeyo howsha faylalka fiidiyowga loona badbaadiyo qaababka lagama maarmaanka u ah warbaahinta.
iTools – maamulaha aaladda iPod, iPhone iyo iPad. Software wuxuu taageeraa dhamaan noocyada la heli karo ee nidaamka hawlgalka macruufka.
Mixcraft – softiweer si loo abuuro loona socodsiiyo heesaha heerar xirfad leh. Softiweerku wuxuu adeegsadaa tikniyoolajiyada dhawaqyada sareysa iyo qalab badan oo loo adeegsado.
Agabka in ay baadhaan iyo muusig. Software wuxuu qabanqaabiyaa maktabadaha music iyo markaas waxaad iyaga ku saaxiibbadayda la wadaagi karo.